Amaanta Raga Soomaaliyeed: Baro hadalada dareenka leh ee ay ragu jecelyihiin
Qormadeena waxay maanta ku saabsan amaanta raga Soomaaliyeed, sida loo amaano rag. Amaanta raga ma ahan wax adag, uma baahnid in aad ku...
Raaxada dumarka sunada ah
Raaxada dumarka sunada ah: Waa nuucee raaxada guurka qaabka galmada? Waa maxay raaxada dumarka sunada ah ay jecelyihiin? Inta aanan...
Guurka: keebaad guursan lahayd labadaan wiil?
Guurka wuu qurux badan yahay markaad heystato qof kuu qalmo. Noloshu waa raaxo markaad heysatid qof aad kula raaxeysato. Guur waa nolol,...